सबै सन्तान कोरोना सँग जुधिरहेको बेलामा यो सरकार जनताको हो कि दलालको ? – अधिकारी – Sanghiya Online
युवा नेता समाजबादी पार्टी
सरकारले ११ चैत्र २०७६ देखि १५ बैशाख सम्मलाई लकडाउनको घोषणा गरेको छ । तर सरकारलाई न सिमानामा रहेका नेपालीको र नत देश भित्रै रहेका नेपालीको मत्लब छ । आउँदा दिनमा हुन सक्ने खाद्य अभावको भयावह स्थितिलई आँकलन गरी छिटो पाक्ने बाली लगाई जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ ।
मुलुकका केही भागमा व्यवसायिक तरकारी खेती, व्यवसायिक पशुपालन र खाध्यान्न उत्पादन प्रचुर मात्रामा भइरहेको छ । राजधानी, सदरमुकामा र शहरी क्षेत्रमा आवश्यक तरकारी, मासु र दुध जन्य वस्तुहरु छिमेकी ग्रामीण क्षेत्रले आपूर्ति गरिरहेका छन् । नेपालीहरु मुलुक फर्कन चाहान्छन् । खुल्ला सीमानाको दुरुपयोग गरी लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । संक्रमणका लागि यो झन खतरा हो । यसबारेमा कूटनीतिक पहल गरी सीमानामा आएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्नु उचित देखिन्छ । यसका लागि सीमा नाकामा मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइनमा राखी परीक्षण गरी आ आफ्नो स्थानमा पठाउनुपर्छ । सिमानामा रहेका नेपालीको आत्म तथा भावनालाई सम्मान गर्दै छिटोभन्दा छिटो स्वदेश फिर्ता गर्नु पर्दछ ।
सरकारका मान्छेले मौका छोपेर कात्रो सिलाएछन । राहत र उद्दारलाई भुलेर जनताका स्वस्थका सबालमा लाग्लु पर्ने सरकार अहिले आयोग गठन र आफ्ना कार्याकर्ता भर्ती गर्न उद्दत छ । यो सरकार जनताको होकि दलालको हो ? कतिपय गरिब श्रमजीवी मजदुरको चुलो नबलेको कति भयो तर सरकारलाई वस्ता छैन । उ आफ्नो नेपाली जनताको साझा नेपाल आमा र सबै सन्तान कोरोना सङ जुधिरहेको अबस्थामा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरु कात्रोमा खल्ती सिलाउन लागेका छ्न न त उसलाई बिदेश रहेको नेपालीको मत्लब छ ।
मन्त्री महासेठ काठमाडौँलाइ धुलोमुक्त बनाउदै, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउत जनकपुर टल्काउदै
स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी सूचना
रौतहटमा कोरोना संक्रमित भेटिएको युवकको उपचारको लागि बाहिर लैजाने तयारी